Adeegsiga Eraybixinta Afka Somaliga, oo Idil Ahaanba ka Maqan Saxaafada Degaanka Somalida Atobiya – Rasaasa News
Jun 9, 2011 Adeegsiga Eraybixinta Afka Somaliga, oo Idil Ahaanba ka Maqan Saxaafada Degaanka Somalida Atobiya, qoraalada iyo dhamaan wixii saxaafada la xidhiidha waxay wax ugu turan yihiin jiritaanka taariikhda degaanka Somalida iyo dadweynaha degaanka ee ku nool dacalada aduunka., Wargayska cakaara.com waa muraayadii laga daawanayey degaanka Somalida Atobiya. Badinta iyo tayaynta wararka
Nidaamka dawladnimadu min degmo ilaa dawlada dhexe meel kasta ha ka jirtee waa isku mid, inkasta oo lagu kala duwan yahay mabaadiida la raacayo iyo hanaanka loo fulinayo hawlaha dawlada. Nidaamkaas jira waxaa uu xil ka saaran yahay hanaaninta laamaha dawlada iyo kuwa aan dawliga ahaynba iyo tababarida shaqaalaha dawlada.
Waxaan in badan arkaa laaxin lagu qoro bogga ku hadla afka dawlada degaanka Somalida Atobiya ee Cakaara.com, kaas oo ay ahayd in boggaga kale ee gaarka loo leeyahay ay kaga daydaan hanaanka qoraalka iyo Eraybixinta afka Somaliga, lagana dhawro waxyaabo badan, maadaama uu yahay saxaafad dawladeed.
Runtii tan iyo intii boggan la sameeyey, waxaa uu soo jiitay akhristayaal badan oo u dhashay degaanka Somalida, kuwaas oo ku kala firidhsan dacalada aduunka, oo intii boggan ka horaysay indho xidhnaa.
Jeclaanta dadweynaha ee boggan ma aha in uu soo gudbiyo qoraalo tayo leh oo soo jiidan kara dadka ama xiiso galiya marka la akhrisanayo, laakiin waa baahida ay dadku u qabaan dawlad matasha.
Dadka u dhashay Degaanka Somalida, waxay maqli jireen in ismaamul iyo dawlad ay ka jirto degaanka Somalida Atobiya, waxaase badnayd waxyeelada maamulku sameeyo ee laga soo sheegi jiray, si dhab ahna dadku waxba uma ogayn wixii ka horeeyey soo bixii bogga cakaara.com.
Wakhtigan casriga ah ee aynu ku jiro saxaafadu iyadaa ah hogaaminta dhabta ah ee aduunka. Tusaale gaaban dawlada Ethiopia way xidhay saxaafada mucaaradka ee Internet-ka iyada oo ayna jirin awood ciidan oo ay gudaha kula dagaalamayso. Xaqiiqdu waa in ay saxaafadu tahay ta hogaamisa dadweynaha aduunka.
Aduunka Qolo waliba waxay leedahay dhaqan, tusaale Somalidu waa dad colaadeed waxayna jecel yihiin waraka, taas oo aad ka garan karto maka ay is bariidinayaan waxay dhahaan [MA NABAD BAA].
Xabashida oo ka mid ah qoomiyadaha Atobiya waxay degan tahay dhul qoyan oo cudurku ku badan yahay kolka ay isbariidinayaana waxay iswaydiiyaan in caafimaad in uu jiro [DHANAAS DILE].
Digaanka Somalida wixii ka horeeyey 2010, waxaa ka maqanaa saxaafada oo ah waxa ay Somalidu ugu jeceshahay aduunka. Arintaa xaqiiqdeeduna dheeho inta bogg wareed ee ay Somalidu leedahay iyo Paltak.
In kasta oo maamulka cusub ee Cabdi Maxamuud Cumar, arimaha aadka loogu amaano ay ka mid tahay saxaafadu, sheegayna maamulkiisu in mar dhaw ay hirgalidoonaan Joornaalo, ideecado iyo telefiishin ku hadla afka degaanka Somalida oo meel walba oo aduunka ah laga daawan doono, ayeyna wali waxba muuqan.
Waxaase hantaaqo ah in wargayska internetka cakaara.com, oo kaligiis ku hadla afka dawlada degaanka uusan gudbin karin wararkii loo baahnaa islamarkaasna ayna kuba qorayn jumlad la fahmi karo oo ka turjumaysa waxa uu wargaysku ka hadlayo.
Eraybixintu waa muhiim [terminology is curicial in writting] marka wax la qorayo. magac bixinta eray ee loo isticmaalo laamaha dawlada iyo kuwa aan dawliga ahayn ee dawlada degaanka waan naxaa kolka aan arko, masuul hadlaya ama wariye warbixin gudbinaya.
Degaanka Somalidu waxaa weeye degaanada Somaliyeed ee lagu kohdo saafinimada Afka Hooyo. Hadaba, hadii qoraalada iyo hadalada aan arko ee saxaafada degaanka Somalidu ay yihiin kuwa ay Somali ku kohoto Aqoonta Afka Somaliga, in aynaarag baa roon ama la helo dadka Afka lagu kohdo.
Masuuliyiinta dawlada degaanka, gaar ahaan masuuliyiinta warfaafinta ayey masuuliyadi ka saaran tahay tababarka iyo dhawrida qiimaha afka Somaliga.
Boggu umma dhaqmo sidii wax dawladi leedahay, waana bogga kaliya ee awooda u leh helida dhacdooyinka dhabta ah ee ka dhaca degaanka. Waxaana ceeb ah in sawirada laga qaado madaxda dawlada iyo hayadaha ee ay ka sii qaadan lahaayeen bogga kale uu Qariyo isaga isaga oo qoraalo badan korka ka saara, arintaas oo bogga micna tirta.
Waxaan aad u qoslay kol aanarkay Iskaashatada Maxkamada oo shir oo shirkeedii soo gabo gabaysay lana baxday magaca iskaashatada maxkamada Guryaha [hp link]. Maxkamad iyo iskaashato maxaa iska galay!
Waxaa kale oo aan maalin dhawayd arkay qoraal aan ka naxay kolkaan arkay ciwaankiisuna ahaa “Madaxweyaha degaanka oo Qaabilay 40 qof oo Qurbo joog ah oo ka timid dibada” sawirka macnaynaya qurba joogta uu qaabilay Madaxeyne Cabdi M Cumar waxaa badhtanka kaga jira Raysalwasaaraha Atobiya [hp link].
Sida la sheego damqadashada masuuliyiinta darteed, qoraalkaygu cidna si gaar ah uma durayo masuuliyiinta iyo qoraayada midna, laakiin waa mid aan ku boorinayno xilna ka saaran yahay dawlada degaanka Somalida sidii ay u horumarin lahayd saxaafada oo sidaan sheeganay dadku jecel yihiin.
Wargayska cakaara.com waa muraayadii laga daawanayey degaanka Somalida Atobiya. Badinta iyo tayaynta wararka, qoraalada iyo dhamaan wixii saxaafada la xidhiidha waxay wax ugu turan yihiin jiritaanka taariikhda degaanka Somalida iyo dadweynaha degaanka ee ku nool dacalada aduunka.
Qore: Mohamed Yuusuf
Ethiopia: 14 Ruux oo Lagu Xukumay Addis Ababa